Manni-maree IHADEG Bakka Addi Bilisummaa Uummata Tigiraay Hin Jirretti Gaaffii Walitti-dabalamanii Paartii “Biltsiginnaa” Uumuu Raggaasise
Paartiin IHADEG, gara paartii tokkicha gamtaa lammiilee hammateetti cehuuf deemsa jalqabe, har’a walga’ii mana-maree isaa har’a eegale irratti itti fufee jira.
Manni-maree kun, koree hoji raaw’achiistuu isaatiin gaaffii walitti-dabalamuu dhihaateef sagalee guutuudhaan raggaasisuu isaa – Miseensi koree hoji raaw’achiistuu IHADEG – Obbo Fiqaaduu Tasammaa Televiiziyoona biyyattiitti dhihaachuun beeksisanii jiran.
Boor immoo seera ittiin bulmaataa paarticha haaraa irratti mar’atee ka raggaasisu tahuunis eegamaa jira. Marii har’a geggeessame irratti, paartichi ilaacha siyaasaatiin gara Mirgaatti yokaan gara Bitaatti otuu hin dayya’iin karaa giddu-galeessaa qabatee ka deemu tahuu – Obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsa har’a kennan sanaan dubbatanii jiran. Sagantaa siyaasaa Paarticha haaraa “Biltsiginnaa Paartii” jedhamee irratti mari’atamee raggaasisamuu isaallee beeksisanii jiran – Obbo Fiqaaduun.
Gama biraatiin Paartiilee EHADEG-n hundeessan keessaa tokko ka tahe Addi Bilisummaa Uummata Tigiraay yokaan HIWEHAAT, kaleessa ibsa baaseen, deemsi paarticha gamtaa diiganii paartii haaraa uumuuf deemamaa jiru kun ka deemsa seeraa eegee hojjetamaa jiru waan hin ta’iiniif, Manni-maree EHAADEG-s ajandaa walitti-dabalamuu paartiilee irratti mari’atee murtii dabarsuuf aangoo seeraas tahe siyaasaa waan hin qabneef, walga’ii kana irratti argamuu hin danda’u, jechuun beeksisee ture.